မြင့်မြတ်ကို Surprise လုပ်တာမအောင်မြင်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
7 Aug 2018 . 2:21 PM
Original Gangster ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွဲတွေမှာ အတူတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေးတို့ရဲ့ အနုပညာညီအစ်ကိုသံယောဇဉ်ကတော့ ပရိသတ်တွေထင်ထားတာထက် အပြင်မှာပိုပြီး နက်ရှိုင်းကြပါတယ်။Hip Hop အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ၊ဒါရိုက်တာ ယုန်လေးတစ်ယောက် ဂျင်းကောင်လို့ နာမည်တွင်ထားတဲ့ မင်းသားမြင့်မြတ်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ သူမသိအောင် ယုန်လေးတို့အဖွဲ့တွေက Surprise Birthday လေးလုပ်ပေးဖို့ ၀ိတိုရိယဆေးရုံကို တိတ်တဆိတ်သွားရောက်ခဲ့ကြပေမယ့် မြင့်မြတ်နဲ့တည့်တည့်တိုးလို့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ ယုန်လေးက လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Myint Myat,Yone Lay,K Nyi
“Happy Birthday . Myint Myat .
Surprise သွားလုပ်တာ မအောင်မြင်သွားဘူး .
ဝိတိုရီယ ဆေးရုံ ခါးတွင်းပေါက်ကနေဆေးလိပ်ထွက်သောက်ရင်း အုပ်လိုက်ကြီး တွေ့သွားတယ် . စီစဉ်သူ ယုန်လေးသေရော . haa haa haaa
မနက်ဖြန် Gangster ပေါက်စလေး လူလောကထဲလာတော့မယ် ” ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ Birthday Wish လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မြင့်မြတ်ဟာ မွေးနေ့လည်းဖြစ်၊ဇနီးဖြစ်သူက မီးဖွားတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အပျော်တွေနဲ့အတူ ကလေးတစ်ယောက်အဖေဖြစ်သွားပါပြီ။ ဇနီးဖြစ်သူ အားလျန်ဟာ ၀ိတိုရိယဆေးရုံမှာ သားယောကျာ်းလေးမွေးဖွားခဲ့တာမို့ မြင့်မြတ်အပါအ၀င် ယုန်လေးတို့အပေါင်းသင်းတွေလည်း ပျော်မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။
Photos Credit – Kyaw Phone Aung Facebook
မွငျ့မွတျကို Surprise လုပျတာမအောငျမွငျလိုကျတဲ့ ယုနျလေး
Original Gangster ရုပျရှငျဇာတျကားတှဲတှမှော အတူတူပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ကွတဲ့ မွငျ့မွတျနဲ့ အဆိုတျောယုနျလေးတို့ရဲ့ အနုပညာညီအဈကိုသံယောဇဉျကတော့ ပရိသတျတှထေငျထားတာထကျ အပွငျမှာပိုပွီး နကျရှိုငျးကွပါတယျ။ Hip Hop အဆိုတျော၊ သရုပျဆောငျ ၊ဒါရိုကျတာ ယုနျလေးတဈယောကျ ဂငျြးကောငျလို့ နာမညျတှငျထားတဲ့ မငျးသားမွငျ့မွတျအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒီနကေ့ရြောကျတဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့ မှေးနမှေ့ာ သူမသိအောငျ ယုနျလေးတို့အဖှဲ့တှကေ Surprise Birthday လေးလုပျပေးဖို့ ဝိတိုရိယဆေးရုံကို တိတျတဆိတျသှားရောကျခဲ့ကွပမေယျ့ မွငျ့မွတျနဲ့တညျ့တညျ့တိုးလို့ မအောငျမွငျခဲ့ဘူးလို့ ယုနျလေးက လူမှုကှနျရကျအကောငျ့မှာ ရေးသားထားပါတယျ။
MyintMyat,Yone Lay, K Nyi
Surprise သှားလုပျတာ မအောငျမွငျသှားဘူး .
ဝိတိုရီယ ဆေးရုံ ခါးတှငျးပေါကျကနဆေေးလိပျထှကျသောကျရငျး အုပျလိုကျကွီး တှသှေ့ားတယျ . စီစဉျသူ ယုနျလေးသရေော . haa haa haaa
မနကျဖွနျ Gangster ပေါကျစလေး လူလောကထဲလာတော့မယျ ” ဆိုပွီး သူတို့ရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့အတူ Birthday Wish လုပျပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ မွငျ့မွတျဟာ မှေးနလေ့ညျးဖွဈ၊ဇနီးဖွဈသူက မီးဖှားတဲ့နလေ့ညျးဖွဈတာကွောငျ့ တဈခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျ အပြျောတှနေဲ့အတူ ကလေးတဈယောကျအဖဖွေဈသှားပါပွီ။ ဇနီးဖွဈသူ အားလနျြဟာ ဝိတိုရိယဆေးရုံမှာ သားယောကျြားလေးမှေးဖှားခဲ့တာမို့ မွငျ့မွတျအပါအဝငျ ယုနျလေးတို့အပေါငျးသငျးတှလေညျး ပြျောမဆုံးဖွဈနကွေပါတယျ။